Weather in Bali amin'ny volana Aogositra ~ Journey-Assist Fety tany Bali amin'ny volana Aogositra.
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Toetr'andro sy Bali » Weather in Bali amin'ny volana Aogositra
Weather in Bali amin'ny volana Aogositra
Ny volana aogositra koa dia manondro ny vanim-potoana mafana ao amin'ny nosy ity ary iray amin'ireo volana malaza indrindra miala voly.
Ity no volana "mangatsiaka", izay midika hoe tonga lafatra 🙂 - tsara tarehy ny andro, mafana fa tsy matavy be kosa, ampy tsara ny andro. Angamba izao no fotoana tsara indrindra atrehin'ny nosy osomotra.
Amin'ny hariva dia misy ny mangatsiatsiaka, noho izany dia mendrika ny maka mafana mafana raha toa ka lava be ny bisikileta.
Varatra any Bali ny volana aogositra
Ny orana amin'ity volana ity dia tsy fahita firy ary, raha ny fitsipika dia tsy tapaka. Ity orana ity no fara-orana farany. 25 ka hatramin'ny 40mm.
Tena mafana ny rano an-dranomasina. Mando hatramin'ny 27 °.
Ny hafanana amin'ny andro tsy dia zara raha mihena 29 °. Raha ny marina, 30 -32 °. Mety milatsaka amin'ny 21 ° C. ny alina.
August Surfing any Bali
Ny volana Aogositra dia asongadin'ny rivotra malemy ihany, izay midika hoe onja malefaka ary ity dia fotoana malemy hidinan'ny rano. Na dia manana onja mety tsara aza ny onjam-peo toa an'i Uluwatu, Kuta, Padang Padang ary Legian.